I-KARDASHIANS IBINGAZI MALUNGA NOROB, UKUZIBANDAKANYA KUKABLAC CHYNA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Usapho lukaRob Kardashian lufumanise malunga nokuzibandakanya kwakhe noBlac Chyna kwimithombo yeendaba: Jonga 'UKWTK' kuqala
Usapho lukaRob Kardashian lufumanise malunga nokuzibandakanya kwakhe noBlac Chyna kwimithombo yeendaba: Jonga 'UKWTK' kuqala
UKourtney Kardashian kunye noodadewabo uKim noKhloe abonwabanga xa befumanisa malunga nokuzibandakanya kukaRob Kardashian noBlac Chyna- ngemidiya yoluntu. (Ifoto ngoncedo lwe-E!)
Ngu: Kelly Spears 06/13/2016 ngo-11: 40 AM
Abakwazanga ukuqhubeka noRob! Intsapho yaseKardashian yafumanisa malunga nayo URob Kardashian ’ Ukuzibandakanya okumangazayo UBlac Chyna njengalo lonke ihlabathi-ngeendaba zoluntu.
Kwindlela entsha Ukugcina kunye neeKardashians ukujonga kwangaphambili, oodade abakhulu bakaRob - UKim, uKhloe kwaye Kourtney - bafunde ukuba umntakwabo uzimisele ukutshata noChyna emva kweenyanga ezingaphantsi kwesithathu bethandana. Amantombazana, esele evakalise inkxalabo malunga nothando olutsha lukaRob, bacaphuka ngakumbi kukuba umntakwabo wayengakhathali ukubaxelela iindaba ezinkulu.
Sivuka kuyo yonke le mifanekiso yomntakwethu eganelwa, uKim, 35, utsho kwikliphu. Akasixeleli njani umzalwana wethu?
Ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, i-duo ebandakanyekileyo ibandakanya icala lika-Chyna losapho. Wayecebisa phambi kwayo yonke intsapho? U-Khloe uyahlutha emva kokufunda inqaku. UKourtney, ngeli xesha, ujongeka ngathi uphethe ikofu yakhe kwaye usabela kwi-fiasco.
URob noChyna babhengeze ukubandakanyeka kwabo kwasekuqaleni kuka-Epreli. Ngelo xesha, lonke usapho lakwaKardashian (ngaphandle kukaRob) baya eColorado kuhambo lokuskiya. Wonke umntu ebethule cwaka kwimidiya yoluntu emva kokuqinisekiswa kweendaba zokuzibandakanya.
Kwiiveki kamva, iintaka zothando zongeze enye into eyothusayo kumxube xa beqinisekisa ukukhulelwa kukaChyna. Ewe! Iqinisekisile kwi-Knot nakwezinye iindawo eziphelileyo kwinyanga ephelileyo ukuba isibini esinempikiswano siza kwabelana ngecala labo kwibali elitsha le-docu-ebizwa ngokuba URob kunye noChyna. T Uthungelwano kwakhona luveze okhethekileyo ukubhiyozela ukuzalwa komntwana kaRob noChyna wexesha elizayo.
Tune kwisiqendu esizayo sedrama Ukugcina kunye neeKardashians ngeCawa, nge-19 kaJuni, ngo-9 ebusuku. ET kwi-E!
zithini iiHors d'd'uvuvs ezinzima
Umahluko phakathi kuka Mnu no Mnu
yintoni isandla esiya iringi
izinto ezimnandi zokwenza ubusuku bomhla
indlela yokubhekisa kumfazi ukuba awazi ukuba utshatile